JMR BlueStor SHARE မှ HD HD သို့ 4K လုပ်ငန်းအသွားအလာမျှဝေခြင်းသိုလှောင်မှု application များအတွက်ကွန်ယက်သိုလှောင်ရေးဆာဗာ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » 4K လုပ်ငန်းအသွားအလာ Shared သိုလှောင် Applications ကိုမှပူးပေါင်း HD ကိုများအတွက် JMR BlueStor SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာ
4K လုပ်ငန်းအသွားအလာ Shared သိုလှောင် Applications ကိုမှပူးပေါင်း HD ကိုများအတွက် JMR BlueStor SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာ
ဂေါ်ဒွန် Moore က, 1965 အတွက်တစ်ဦး IC သို့မဟုတ် chip ကိုအတွက်စစ္၏နံပါတ်တိုင်းနှစ်နှစ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်ဆ, ဒါမှမဟုတ် IC ရှုပ်ထွေးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တိုင်းနှစ်နှစ်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်မှာအဆချဲ့ထွင်နိုင်ကြောင်းကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပင်အဆိုပါ 1950s အတွက် IBM ကဒေတာသိုလှောင်မှု 50MB ပေးရ 24 "x3.75" ဖလားနှစ်ခုရေခဲသေတ္တာ၏အရွယ်အစားခဲ့ကြောင်းပထမဦးဆုံး hard disk ကို drive ကိုမိတ်ဆက်ပြသ; ယင်း၏ 1956 ဗားရှင်းနဲ့ကို MB နှုန်း $ 305k (MB နှုန်း $ 5) မှာအချက်အလက်များ၏ 10MB ကိုင်ပြီးသူ့ရဲ့ RAMAC 10 စနစ်ပေါင်းစပ်။ နှိုင်းယှဉ်မှုမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့ 8TB drive ကို 0.038 $ 3.8 က x (GB ကိုတစ်ဦးလျှင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 10 ကုန်ကျ-8 ကို MB နှုန်း) နှင့် 100% CAGR မှာကြီးထွားလာ, ASTC သည်နှင့်အညီ, 3.5 သည်။ ပုံစံအချက်တစ်ခု 2025 အတွက် 30TB သွား။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဇယားကိုကြည့်ပါ။
အတိတ်ကာလတဝက်ရာစုနှစ်သိုလှောင်မှုနည်းပညာ၏ဆင့်ကဲကြည့်ယူခြင်း, သိုလှောင်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုလည်ပတ်မှုစနစ်များတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူဒွန်တွဲအစိတ်အပိုင်းရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်စနစ်ကကုန်ကျစားရိတ်များအစဉ်အမြဲ commoditization ထံမှတဦးတည်းအကျိုးရှိသော takeaway ကွာ, စီးပွားဖြစ် monolithic နှင့်စျေးကြီးရောင်းချသူသော့ခတ်-In ကနေပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါသည် ခေတ်ဟောင်း၏ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလက်ဝါးကြီးအုပ်ယှဉ်ပြိုင်ရှုခင်းအစဉ်အ-တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း, စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနည်းပညာနှင့်အတူကုန်စည်ရင်းမြစ်ထားတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲဖြင့်အစားထိုးခံရ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားရန်, အလတ်စားအသေးစားအများအပြားစကေးသိုလှောင်မှုထုတ်လုပ်သူစွမ်းဆောင်မှုနှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကိုတိုးတက်စေရန် SAS / SATA HDDs, SSDs နဲ့မျိုးစပ် drives တွေကို၏ရွေးချယ်မှု, ထုံးစံ ASIC တိုးမြှင့်, cableless backplanes နှင့်အထူးပြု I / O NICs အပါအဝင်သူတို့ရဲ့စနစ်တွေတန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်ပြီ ပိုမိုထိရောက်သောအပူလွန်ကျူးခြင်းနှင့်ဆူညံသံထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပိုကောင်းဝင်းနှင့်ပန်ကာဒီဇိုင်းများ; dual-RAID ပူ-swappable ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေရန်, ကိုယ်လက်-အခမဲ့စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေရေးယုံကြည်စိတ်ချရနှင့် MTBF တိုးတက်စေရန်နှင့်အဆင့်မြင့် In-အိမ်သူအိမ်သား / OEM software ကို operating system မြား။ အဆိုပါရလဒ်ထိပ်တန်းဆင့်ရောင်းချသူ၏ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာက enterprise level စွမ်းဆောင်ရည်, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးမယ့်သိုလှောင်မှုစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောစနစ်ကကမ်းလှမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် JMR အီလက်ထရောနစ်, Inc နှင့်သူတို့၏ကစျေးသက်သာသောစျေးနှုန်း Dual-RAID BlueStorTM euroNAS software ကို OS ကိုစွမ်းအားဖြင့် SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာ.
ငယ်-to-အလတ်စားလိုလားသူ av အ, ထုတ်လွှင့် / cable ကို / မှပစ်မှတ်ထားဂြိုဟ်တုမီဒီယာများနှင့်မြင့်မားသောရေရှည်တည်တံ့ throughput လိုအပ်မြန်နှုန်းမြင့် Ethernet သို့မဟုတ် Fiber ကိုအခြေခံပြီး, High-ဝန် applications များ (shared သိုလှောင်မှု) အတွက်လိုအပ်ပြီထုတ်လုပ်မှု / post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ streaming, အ BlueStor SHARE server ကိုဖိုင်ကို်ထမ်းဆောင်, ဝန်-balancing နှင့် fault- များအတွက်စံပြဖြစ် သည်းခံအီးမေးလ် / web server သို့ / streaming မီဒီယာ, ဒစ်ဂျစ်တယ် A / V ကို (အသံ / ဗီဒီယို) လုပ်ငန်းအသွားအလာသိမ်းဆည်းခြင်း, HA စပျစ်သီးပြွတ်နှင့်သိုလှောင်မှုပလီကေးရှင်းကို back up ။ အခြားသော Enterprise-လူတန်းစားဟာယပူဇော်သက္ကာထက်လျော့နည်းအထိငါးကြိမ်မှာစျေးနှုန်းက 160U ဝင်းထဲမှာဒေတာစွမ်းရည် 3TB မှမရရှိနိုင်တက်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဦးခေါင်းယူနစ်နှင့်အတူ 1 PB ကျော်လွန်စကေးနိုင်ပါတယ်။ စတင်ချိန် မှစ. ပေးအပ်ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်လိုင်စင်အဆင့်မြှင့်တင်ဘို့မလိုဘဲန့်အသတ်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ခွင့်ပြုပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယမျိုးဆက်ကွန်ရက်ဆာဗာကိုအိုင်တီကြှနျုပျတို့၏အဖြေကိုစီမံအုပ်ချုပ်သို့မဟုတ် A / V ကိုပညာရှင်များအဓိကအမှတ်တံဆိပ်အမည်များကနေပေမယ့်စျေးကြီးတဲ့စျေးနှုန်းမပါဘဲအသုံးပြုမှုအလားတူစွမ်းဆောင်ရည်, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ငြိမ်ဝပ်လိုသောဖြစ်ပါတယ်" ဟု Josef Rabinovitz, JMR ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ "ပိုကြီးသောပြိုင်ဘက် '' ဟာယပူဇော်သက္ကာကိုငါးကြိမ်အထိကပိုစျေးကြီးတယ်နဲ့ file system ကိုထောက်ခံကြောင်းသို့မဟုတ် setup ကိုများနှင့်စစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနံမကိုက်ညီပါဘူး။ သေးငယ်ပြိုင်ဖက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းကိုက်ညီဖို့ရုန်းကန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ system ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေး, ယုံကြည်စိတ်ချရနဲ့ performance အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်-အာရုံစူးစိုက်ကြိုတင် / ပြီးနောက်-ရောင်းအားထောက်ခံမှုများအားကောင်းမကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းယူနစ်သို့ SAS RAID နဲ့ဖိုင်ဆာဗာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် server ကိုပစ္စည်းမိုဃ်းတိမ်, virtualized နှင့် Cluster ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှ applications များချဲ့ထွင်ရန်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်န့်အသတ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဖွင့်, ဆုံကွန်ရက်များအဘို့ရိုးရှင်းသော, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်သိုလှောင်မှုကယ်တင်တတ်၏။ "
Rabinovitz အဆိုအရ BlueStor SHARE သိုလှောင်မှု server ကိုရှုံးနိမ် Airflow ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ရမှတ်အသေးအဖွဲ, ဒေတာလမ်းကြောင်းအတွက်နှစ်ခုသာကေဘယ်ကြိုးတွေကိုအသုံးပြုမယ့်ထူးခြားတဲ့မူပိုင် modular ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ 3U ထိန်သိမ်း SAS / SATA စနစ်ကတဆယ်ခြောက် 3.5 "သို့မဟုတ် 2.5" SAS, SATA, ဒါမှမဟုတ် solid state drive (SSD) ကို SATA-III ကို drives တွေကိုနှင့်အတူ 1,800 ကို MB / s အထိ affording နှင့် 3,000 MB / s SSDs ကို အသုံးပြု. နှင့် 160TB မှတက်လိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်တပ်ဆင်ထား စွမ်းရည်မြှင့်လျက်, ဒီဇိုင်း-in ကိုပေါ့ပါး, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အမြင့်ဆုံးအချက်ပြမှုသမာဓိရှိနှင့် Airflow များအတွက်တုန်ခါမှု-dampening disk ကို drive ကိုသေတ္တာကလေးဒေါင်လိုက်-တပ်ဆင်ထား disk ကို drives တွေကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါရလဒ်နိမ့် drive ကိုအပူချိန်မြင့်စစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုနှင့်အစွန်းရောက်ယုံကြည်စိတ်ချရဖြစ်ပါတယ်။
ဆာဗာကိုလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအလုံးအရင်းကမ်းလှမ်း, တဆယ်ခြောက် 6Gb / s ကို SAS / SATA disk ကို drive ကို bays အပါအဝင်လေး (N ကို + 1 configured) မလိုအပ်တဲ့ကိရိယာ-controlled High-အလျင်က high-အလျင်အအေးပရိသတ်တွေ, Dual 620W (N ကို + 1) hot- features swappable ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, ခြောက်လ 24Gb / s နဲ့ NIC port များသို့မဟုတ် optional ကို Dual-/ ကို quad 6GbE ကွန်ရက်အင်တာဖေ့, quad မှတ်ဉာဏ်ရုပ်သံလိုင်းဗိသုကာ, PCIe တိုးချဲ့ slot နှစ်ခုမှတက် dual-3.0-port ကို 1GB ပြည်တွင်းရေး SAS တိုးချဲ့ရန်, Dual (optional) PCle10 SAS ဟာ့ဒ်ဝဲ RAID controller စနှင့် တစ်ဦး 3.5 GHz အမြန်နှုန်း quad-core နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသားဘုတ် Intel က i7 CPU ကိုသို့မဟုတ် dual-8-Core Xeon CPU များနှင့်တစ်ဦး Intel ကZ97 Express ကို chipset ကို™။
ထို့အပြင် BlueStor SHARE သိုလှောင်မှု server "လို့ SES 2.0 လိုက်နာသည် drive ကိုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အဘို့ကို real-time disk ကိုလှုပ်ရှားမှု / ပျက်ကွက်မှုအခြေအနေကိုအဖြစ်အာဏာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ user interface ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ညွှန်းကိန်းများနှင့်ကွားနိုငျသောနှိုးစက်နှင့်အတူ status ကိုအအေး, အပေါင်းရှေ့တွင် panel ကိုထောက်ပံ့ Off-အပေါ် "နှင့်" "switches များပြန်စပါ။
တစ်ခုတည်းယူနစ်သို့ SAS RAID နဲ့ဖိုင်ဆာဗာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေါင်းစပ်ပြီး, ထို BlueStor SHARE သိုလှောင်မှု server ကိုထိုကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမပူဇော်နိုင်သည့် ပို. နိမ့်ဆုံးစနစ်များကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကုန်ကျအလွန် High-end လုပ်ငန်းစနစ်များ, အကြားလိုအပ်ကြောင်းဖြည်။ အဆိုပါ BlueStor SHARE သိုလှောင်မှု server ကိုလေးချွေ, high-performance ကို configurations အတွက်ရရှိနိုင်: (1) စီးပွားရေး 64-bit မှာ; က Ultra (2) ပရီမီယံ; (3) HA Cluster 64-bit နဲ့ (4) Fiber Channel ကို Cluster ။ အခြေခံစီးပွားရေး 64-bit မှာ configuration ကို RAID 1,5 ထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါပရီမီယံ Ultra နှင့် HA (High ရရှိနိုင်) Cluster configurations, အမြင့်ဆုံးသိုလှောင်နိုင်စွမ်းထောက်ခံမှုနှင့်အတူ 10 Gb / s ကို 802.3ad link ကိုစုစည်းမှု (LACP) နဲ့ networking, JMR ရဲ့ပြည်တွင်းရေးဟာ့ဒ်ဝဲ RAID နဲ့ controller အားလုံးအတှကျထောကျပံ့ပေးဝန် balancing နှင့် failover features တွေထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Dual-ဆာဗာများ၏အသုံးပြုမှုကိုလိုအပ်သည်) ကို HA Cluster ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်, ဒေတာလုံခြုံရေးနှင့် 100% ရရှိနိုင်မှုမစ်ရှင်အရေးပါဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြည့်စုံ redundancy နှင့်တက်ကြွ-တက်ကြွ server ကို failover နှင့်အတူပရီမီယံက Ultra ရဲ့ features တွေကိုပံ့ပိုးဘယ်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်းဆိုများအတွက်အဆုံးစွန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Fiber Channel ကို Cluster တစ်စက်ရုံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်မှု, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်လုံခြုံရေးပေးထားပါတယ်။ ပိုပြီးင်ဘယ်အရာကိုအသုံးပြုသူများယှဉ်ပြိုင်မှုကနေ '' လစာ-အဖြစ်-you-go '' လိုင်စင်နှင့်မတူဘဲဝယ်ယူအတူန့်အသတ်သိုလှောင်မှုလိုင်စင်ရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအစွမ်းထက် BlueStor SHARE သိုလှောင်မှု server ကို euroNAS software ကိုက AFP, NFS, SMB / CIFS နှင့် FTP support အပါအဝင်အိုင်တီပညာရှင်များနှင့် A / V ကိုပညာရှင်များနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုလုပ်ရသောအင်္ဂါရပ်များအရေအတွက်, ရှိပါတယ်; built-in iSCSI ပစ်မှတ် VMware ESX Microsoft Hyper-V ကို, Citrix XEN များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ; နှင့် VMware ESX Microsoft Hyper-V ကို, Citrix XEN များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Fiber Channel ကိုပစ်မှတ်; အခြားဆာဗာသိုလှောင်မှု replicates ကြောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပွား; လျှပ်တစ်ပြက်လျင်မြန်စွာတိုက်ရိုက်ဒေတာ replicates ကြောင်းပွားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ; အစောပိုင်းပြည်နယ်ဖိုင်များကို recover ကြောင်းနှင့် Point-In-အချိန်ရိုက်ချက်။ ပိုများသောအထူးသ, ဆော့ဖ်ဝဲပါဝင်သည်:
hardware Agnostic OS ကို
အမွေအနှစ်သိုလှောင်မှုထုတ်လုပ်သူမကြာခဏစီးပွားဖြစ်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်သာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်ကို run ပါလိမ့်မယ်အရာတခု operating system ကိုအသုံးပြုပါ။ euroNAS နှင့်အတူ, စံဆာဗာများကိုအစွမ်းထက်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အတုယူပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာနိုင်ပါတယ်။
Software များ-defined သိုလှောင်
euroNAS ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးဆာဗာများထောက်ခံပါတယ်ဒါပေမယ့်ရှင်းလင်းသောသတ္တုဟာ့ဒ်ဝဲမလိုအပ်ပါဘူး။ အသုံးပြုသူများသည် သာ. ကြီးမြတ်တစ်ခုခုတည်ဆောက်ဖို့သူတို့ရဲ့တည်ဆဲသိုလှောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်ဒီတော့ဒါဟာ virtualized ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းကုန်ကျ-ထိရောက်သောရဲ့ Virtual သိုလှောင်ပစ္စည်းကိရိယာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
euroNAS သူတို့ရဲ့ဇာတိ protocols များနှင့်အတူအားလုံးအဓိက clients များထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာ Microsoft Windows နဲ့ (XP မှာ, 7, 8, 10, 2003 / 2008 / 2012, က Hyper-V ကို), VMware ESX / ESXi, Apple က Mac OS X မျိုးကွဲများအပါအဝင်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ XSAN, StorNext, Citrix XenServer 5.x / 6.x, Linux ကို။
ဆာဗာ Active Directory Domain အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် configured နိုင်ပါတယ်အသုံးပြုသူများနှင့် passwords ကိုအလိုအလျောက်ဒိုမိန်းတွေနဲ့ညှိခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မည်။ System ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအများကြီးပိုလွယ်သူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများနှင့်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းစီမံနိုင်သည်။
SMB / CIFS ပံ့ပိုးမှု
euroNAS ထုတ်ကုန် (ဆာဗာကို Message Block ကိုဗားရှင်း 1,2နှင့် 3) SMB မှတဆင့်ရှယ်ယာကိုရယူသုံး / CIFS (ဘုံတွင်အင်တာနက် File System) ကို Windows client များအတွက် protocol များကိုထောက်ပံ့။
Photo: AFP ပံ့ပိုးမှုမျိုးကွဲများအပါအဝင်။ Spotlight ကို
euroNAS ထုတ်ကုန် Apple က client များအတွက် AFP သို့ (Apple ကတင်ခဲ့သောပရိုတိုကော) မှတဆင့်ရယူသုံးရှယ်ယာထောက်ခံပါတယ်။ ထို့အပြင် euroNAS ပရီမီယံကိုလည်းအလွန်အမင်းအစာရှောင်ခြင်းအကြောင်းအရာရှာဖွေရေးဖွပေးသော Spotlight ကို, အဆင့်မြင့် feature ကို, ထောက်ခံပါတယ်။ အကြောင်းအရာ၏ indexing စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့် MAC Clients တွေအနေနဲ့၏ဝန်ကိုလျော့နည်းစေသည့်ဆာဗာအတွင်းပြုမိသည်။
euroNAS ထုတ်ကုန် Linux / Unix client များအတွက် (ကွန်ယက်စနစ်ပရိုတိုကော File) NFS မှတဆင့် data တွေကိုရယူသုံးအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ
iSCSI စသည်တို့ကိုတစ်ခု virtualization အတွက်အသုံးပြုနိုင်ဆာဗာအပေါ်ကို virtual disk တွေ (iSCSI ပစ်မှတ်) ၏ဖန်တီးမှုခွင့်ပြုထားတဲ့ IP ကို-based သိုလှောင်မှုကွန်ယက်ပရိုတိုကော, shared သိုလှောင်မှုက Fiber Channel ကိုနှိုင်းယှဉ်မဆိုဆက်ကပ်အပ်နှံ cabling နှင့်ကွန်ယက် devices များမလိုအပ်ပါဘူး ပစ်မှတ်။ euroNAS ထုတ်ကုန်ပိုကောင်းကွန်ယက်ကိုလုံခြုံရေး VMWare နှင့် CHAP (စိနျချေါမှု-လက်ဆွဲ Authentication Protocol) အရှိန်မြှင့်ဘို့အ iSCSI, VAAI (Array ပေါင်းစည်းရေးများအတွက် vStorage API ကို) ထောကျပံ့ပေး။
ဖိုင်ဘာ Channel ကိုထောက်ပံ့
ဖိုင်ဘာချန်နယ် (FC အသင်း) အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြန်နှုန်းမြင့်သိုလှောင်မှုနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ euroNAS နှင့်အတူအသုံးပြုသူများစီးပွားရေးလုပ်ငန်း I / O နှင့်မြန်နှုန်းပေးသွားမှာပါတစ်ခု FC အသင်းသိုလှောင်ပစ္စည်းတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ 16 Gb / s အထိအမြန်နှုန်းထောက်ခံပါတယ်။ SAN Cluster နှင့်အတူကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း FC အသင်း protocol ကိုအသုံးချဖို့တစ်စက်ရုံရဲ့ဒေတာကို mirror နိုင်ပါတယ်။
euroNAS ပရီမီယံနှင့် HA Cluster ကက်ရှ် tier များအတွက် configured နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသည် dynamically ထိုကဲ့သို့သော SSD ကိုအဖြစ်ပိုမိုမြန်ဆန်သေးငယ်ကိရိယာမကြာခဏအသုံးပြုသော data ကိုပြောင်းရွှေ့သဖြင့်တစ်ဦးသိုလှောင်မှုဆာဗာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဒီအမျိုးစပ်သိုလှောင်မှု server ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပိုမိုမြင့်မား I / O စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ပိုကြီးတဲ့စွမ်းရည်များကိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလိုအလျှောက်အဝင်ဒေတာ transfer ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပိုမြန် (SSD) ကို disk တွေပိုပြီးမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်ကြောင်းလုပ်ကွက်လှုံ့ဆျောပေးပါလိမ့်မယ်။ ဆာဗာကြာကြာကြောင့်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပိုထိရောက်, အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထူးအိမ်သင်စီမံလုပ်ကိုင်မှုကိုသူတို့ဖန်တီးထားရာ (Just-အလုံအလောက်နှင့် Just-in-အချိန်အခြေခံပေါ်တွင် အခြေခံ. ) ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသံအတိုးအကျယ်ထက်ပိုပြီးပေါင်းစပ်အာကာသနှင့်အတူကို virtual volumes ကို၏ဖန်တီးမှုတစ်ခု euroNAS ပရီမီယံ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်အာကာသကြောင့်လိုအပ်သောအခါအရင်းအမြစ်များကိုတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်ရှိရာတစ်ဦးထက်ပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မော်ဒယ်ပိုမိုထိရောက်သောအသုံးချဖြစ်ပါတယ်။
euroNAS HA Cluster, အစစ်အမှန်အချိန်မှတဆင့်နှစ်ခုတန်ပြန်မြင်ဆာဗာများအကြားအဆက်မပြတ် data တွေကိုပွားများနှင့်ထပ်တူမြင့်မားရရှိနိုင်မှုပေးထားပါတယ်။ သူတို့သည်တဦးပျက်ကွက်မှု၌ဒီတော့နှစ်ဦးစလုံးဆာဗာများ, redundancy လုံခြုံရေးတူညီဒေတာဆံ့, client များနေတုန်းပဲသူတို့ရဲ့ဒေတာရယူနိုငျပါသညျ။ ဒါ့အပြင်သူကတစ်ချိန်တည်းမှာဆာဗာများနှင့်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုထိရောက်ပါသည်ဖွင့်, အရာ server ပေါ်မှာ run သင့်သောအရင်းအမြစ်များကိုသတ်မှတ်ပေးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, HA စပျစ်သီးပြွတ်ထိုကဲ့သို့သော SMB / CIFS / AFP သို့ (CIFS နှင့်အေအက်ဖ်ပီကိုများအတွက်), Active Directory စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း, NFS များနှင့် iSCSI အဖြစ်န်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်ထောက်ခံပါတယ်။
Fiber Channel ကိုမှတဆင့်ဆာဗာကြေးမုံ
euroNAS SAN Cluster သိုလှောင်မှုကွန်ရက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် A / V ကို Workflows များအတွက်ပိုကောင်းဒေတာ throughput စွမ်းဆောင်ရည်စံပြနှင့်အတူမြင့်မားရရှိနိုင်မှုစပျစ်သီးပြွတ်၏ဖန်တီးမှုအဘို့အ Fiber ရုပ်သံလိုင်းကနည်းပညာအပေါ်အခြေခံသည်။ SAN Cluster မြင့်မားသော redundancy များအတွက်အဆင့်မြင့် Real-time server ကိုပွားအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ရာ euroNAS SMART SAN Mirror (ESSM ဒုံးပျံ) နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။
ရိုက်ချက်အသုံးပြုသူကာလ၌အထူးသဖြင့်အချက်မှာရှယ်ယာ / iSCSI / FC အသင်းပစ်မှတ်၏ပြည်နယ်တစ်ခုတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်စီစဉ်ထားမိတ္တူလုပ်ခွင့်ပြုပါ။ အဆိုပါလျှပ်တစ်ပြက်သည့်လျှပ်တစ်ပြက်ကိုဖန်ဆင်းသောအခါ, လိုအပ်လျှင်, အမှတ်မှာဝေစု၏ပြည်နယ်ပြန်နိုင်သည့် Configuration နဲ့ disk ကိုဒေတာပါဝင်သည်။
Server ကိုထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဒေသခံကွန်ယက်သို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လျင်မြန်စွာရှည်လျားသောအကွာအဝေးကျော် data တွေကိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည့်အဆင့်မြင့် tool ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေကူးယူတဲ့အခါမှာ data တွေကိုထပ်တူစဉ်အတွင်းထိုဖိုင်များကိုအတွင်းသာပြောင်းလဲ bytes သိသိသာသာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးပွါးနှင့် bandwidth ကိုကယ်တင်သောပြောင်းရွှေ့လျက်ရှိသည်။ လျှပ်တစ်ပြက်ပွားအင်္ဂါရပ်သင်သည် "အေးစက်နေတဲ့အကြောင်းအရာ" ကော်ပီကူးဖို့ဖွ - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဒေတာတွေကိုကူးယူတဲ့အခါမှာဒီဒေတာကိုရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းအလုပ်အကိုင်များနေ့စဉ်သို့မဟုတ်အလုပ်ချိန်နာရီကို run ဖို့စီစဉ်ထားနိုင်ပါတယ်။
client Backup ကို
ဒီ feature တစ်ခု euroNAS ဆာဗာကတခြားနိုင်ငံခြား NAS ဆာဗာ backup တစ်ခုအောင်အသုံးပြုသည်။
hardware RAID ပံ့ပိုးမှု
euroNAS ထုတ်ကုန် RAID Array ကိုပိုကောင်းစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှအမျိုးမျိုးသောနဲ့ controller နှင့်အတူဟာ့ဒ်ဝဲ RAID ထောက်ခံပါတယ်။ euroNAS ဆာဗာများကိုအဆိုပါ interface နဲ့ထောက်ခံမှုအီးမေးလ်ကအကြောင်းကြားစာများအတွင်းပေါင်းစည်းဟာ့ဒ်ဝဲ RAID စီမံခန့်ခွဲမှု tools များဆက်ကပ်။ ဒါဟာအစပိုမိုလွယ်ကူစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် LSI သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအေးဂျင့်တို့ပါဝင်သည်။
Software ကို RAID ပံ့ပိုးမှု
RAID 0, 1, 10, 5,6အပါအဝင်အားလုံးအဓိက RAID အပြင်အဆင်၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော redundancy ဖြေရှင်းချက်။ ဒါဟာအစ disk ကိုပျက်ကွက်၏အမှု၌အွန်လိုင်းစွမ်းရည်တိုးချဲ့ရေး, Hotspare Drive ကိုနဲ့အီးမေးလ်အကြောင်းကြားစာကိုထောက်ခံပါတယ်။
APC UPS ပံ့ပိုးမှု
euroNAS ဆာဗာကိုအလိုအလျောက်အနိမ့်ကျထရီအပေါ်ဆာဗာပိတ်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ အီးမေးလ်ကနေတဆင့်လက်ငင်းအကြောင်းကြားစာပါဝါပျက်ကွက်၏အမှု၌ကိုစေလွှတ်နေပါတယ်။ ကွန်ယက်နှင့်က USB APC UPS ပစ္စည်းတွေလည်းထောက်ခံနေကြသည်။
Network ကို Bond
ကွန်ရက်အင်တာဖေ့ failover redundancy သို့မဟုတ်တိုးလာ throughput များအတွက်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
euroNAS disk ကို / Power ပျက်ကွက်, ထပ်တူအစီရင်ခံစာများ, UPS သို့မဟုတ်စပျစ်သီးပြွတ်အကြောင်းကြားစာများ၏အမှု၌အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
နှစ်ဦးက post ကိုအဆောက်အဦဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ la Grange Post ကို နှင့် သခွားသီး & Company မှ သူတို့ JMR ရဲ့ BlueStor SHARE ဝယ်ယူခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့စနစ်သုံးပြီးခဲ့ကြသည်ဘယ်ကြောင့်အမေရိကန်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တွေ့မြင်ရန်။ တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေပြု la Grange Post ကို အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပါဝါမှ 200TB စွမ်းရည်များအတွက် JBOD တိုးချဲ့ထည့်သွင်းအပြင်, သူတို့ရဲ့အလယ်ပိုင်းသိုလှောင်မှုအချက်အချာအဖြစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့သိုလှောင်မှု server ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။
la Grange Post ကို, 2008 အတွက်၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများနှင့်ပို့ဆောင်ထံမှအထိန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအကြောင်းအရာကုမ္ပဏီများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများထောက်ပံ့ပေး, ဗီဒီယို / အသံတည်းဖြတ်ရေးနှင့်အရောင်ဆုံးမခြင်းရန်, Audio / Video ပွနျလညျထူထောငျဖို့, နိုင်ငံခြားအပုဒ်ကိုက်ညီနှင့်ရုပ်ရှင်-to-ဗီဒီယိုကိုလွှဲပြောင်းပေးသော ။ ထုတ်လွှင့်အတွက်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူစက်ရုံနှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်ဗဟိုပြုန်ထမ်းများ, ပြဇာတ်, ကော်ပိုရိတ် AV စနစ်နှင့် web-based programming ကိုလည်း bays, ပြည့်စုံကင်မရာနှင့်အလင်း packages များ, ဂရပ်ဖစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး, မူရင်းဂီတတေးရေးနှင့်ပြည်နယ်တည်းဖြတ်လိုင်း-ချွတ်နှင့် On-line ကို 4K features -of-The-Art အသံကအဆောက်အဦ။
euroNAS OS ကိုစွမ်းအားဖြင့် 10GbE ဖိုင်ဘာ I / O ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ JMR ရဲ့ BlueStor SHARE, Mac ကိုအသုံးပြုသည်အရာ, အားလုံး, La Grange ရဲ့ပြင်ဆင်ရန် bays များအတွက်ဗဟို Drive နှင့် repository ကိုအဖြစ်ပြုမူခြင်းနှင့် လွန်စွာလိုလားသော ဆော့ဖျဝဲပလက်ဖောင်း။
စက်ရုံပိုင်ရှင် Ayal Nitzan အဆိုအရ "ကျနော်တို့မျိုးစုံ drives တွေကိုဖြတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှာဖွေနေအချိန်အများကြီးသုံးစွဲမတိုင်မီ JMR SHARE NAS သိုလှောင်မှုစနစ်ကိုပေါင်းစပ်ဖို့တစျခုတည်နေရာသို့မဟုတ် GUI ကိုပြတင်းပေါက်အတွက်အရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်ကြဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ system ကိုလိုအပ်ချက်, မျိုးစုံပြင်ဆင်ရန် bays ထံမှ Workflows 4K မှတက်၏ဖတ်ပြီးသား / Write လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အနာဂတ်-သက်သေပြသည့်စနစ်ထည့်သွင်းကာယုံကြည်စိတ်ချရအလွန်မြင့်မားတဲ့ဘွဲ့, ပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ client ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာရှိသည်။ "
အလားတူပင် Beckley အနောက်ဗာဂျီးနီးယားအခြေပြု သခွားသီး & Company မှ ကုမ္ပဏီ၏အသုံးပြုနေသည် BlueStor SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာ Mac အတွက်အခြေစိုက်နောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကိုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုစီမံကိန်းများကိုပြီးနောက်၎င်းတို့၏ဗဟိုသိုလှောင်မှု repository ကိုအဖြစ် 160TB စွမ်းရည်နှင့်အတူ။
2003 အတွက်၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာသခွားသီး & ကုမ္ပဏီ, ဗီဒီယိုကထုတ်လုပ်မှု, web design မှာပါန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများထောက်ပံ့ပေး မာလ်တီမီဒီယာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, နှင့်တောင်တန်းပြည်နယ်နှင့်တစ်နိုင်ငံလုံးတစ်လျှောက်လုံးဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများ, ကင်မရာအော်ပရေတာ, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးနှင့်၎င်း၏ client များမတတ်နိုင်ကြောင်းတိုက်ရိုက် streaming များဒါရိုက်တာများ၏ကားကိုကြော်ငြာ, ကော်ပိုရိတ်လေ့ကျင့်ရေးဗီဒီယိုများ, က်ဘ်ဆိုက်မြှင့်တင်ရေးဗွီဒီယိုများနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်လွှမ်းခြုံအဖြစ်ပေါင်းစုံအပါအဝင်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုထုတ်ကုန်ပါဝင်သောအနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖောက်သည်ဗဟိုပြုအဖွဲ့သည်လမ်းဦးစားပေးသွားမည် -camera အွန်လိုင်းကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်စီးဖြစ်ရပ်များအသက်ရှင်ရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူရိုက်။
euroNAS OS ကိုစွမ်းအားဖြင့် 10GbE ဖိုင်ဘာ I / O ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ JMR ရဲ့ BlueStor SHARE, သခွားသီး & ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှု Workflows များအတွက်အဓိက Drive နှင့် repository ကိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ facility ပိုင်ရှင် Dwane Muncy ကျနော်တို့မျိုးစုံ drives တွေကိုဖြတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှာဖွေနေအချိန်အများကြီးဖြုန်းသို့မဟုတ်မှားခဲ့ကြ, ကြှနျုပျတို့မတိုင်မီ JMR NAS storage ကို server ကို install လုပ်ပါမှတဦးတည်းတည်နေရာအတွက်အရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်ကြဘူး "ကြိုတင် SHARE ရွေးချယ်ရာတွင်ဖို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစိန်ခေါ်မှုများကရှင်းပြသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ရက်သို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်စွမ်းရည်လိုအပ်ချက်မျိုးစုံပြင်ဆင်ရန် bays, လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို, ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အလွန်မြင့်မားဒီဂရီရှိသည်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ client ကိုကနေ real-time 4K Workflows မှတက်၏ဖတ်ပြီးသား / Write လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အရွယ်မှာစနစ်ကပါဝင်သည် ထောက်ခံမှုနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာ။ "
သခွားသီး & Company ကို JMR နှင့်၎င်းတို့၏ BlueStor SHARE system ပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီအများအပြားရောင်းချသူသုတေသနပြု။ Added Muncy "SHARE တည်ဆောက်အရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရ, စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်စွမ်းရည်, လုပ်ဆောင်ချက်ကို, စျေးနှုန်းနှင့်အရောင်းထောက်ခံမှုပြီးနောက်ပေါ်မှာငါတို့လိုအပ်ချက်သေတ္တာများအပေါငျးတို့သစစ်တယ်။ တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်အကျိုးအတွက်စနစ်က high-ဝန် shared သိုလှောင်မှုပလီကေးရှင်းကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်များအတွက်အားသွင်းမထားဘူးတဲ့ software ကိုလိုင်စင်ရှိခြင်းနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကကမ္ဘာ့အဆင့်မီကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ထိပ်တန်း-ထစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအလွန်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့နေသောမေးခွန်းတစ်ခု, JMR နှင့်၎င်းတို့၏ထောက်ခံမှု်ထမ်းခဲ့ကြအခါတိုင်း, ငါ့ကိုကိစ္စကိုဖြေရှင်းကူညီခွင့်ရှိကြ၏။ "
10GbE 1GbE 4K 4K / UHD ကစားထွက် server ကို လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် တည်းဖြတ်ခြင်း HDR HEVC ပေါင်းစည်းမှု JMR post ကိုထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်မှု RAID ဆာဗာ တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2019-07-15
ယခင်: Sasani Studios က EditShare လုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions နှင့်အတူ၎င်း၏ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းကဆောက်
နောက်တစ်ခု: 2019 -2020 ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်ဗီဒီယိုအထူးကု (အသေးစားပညာပေးအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ)